Askar American Ah Oo Dhimasho Iyo Dhaawac Ku Noqday Gobalka Qunduuz. – Calamada.com
Askar American Ah Oo Dhimasho Iyo Dhaawac Ku Noqday Gobalka Qunduuz.
Wararka ka imaanayo wadanka Afgaanistaan ayaa sheegaya in saacadihi lasoo dhaafay ay dagaalo xoogan ka dheceen gobolada Qunduz iyo Badakhshan oo kala dhaca woqooyiga iyo bariga wadankaasi.
War lagu faafiyey baraha internetka ee Imaraada islaamiga ah ayaa lagu sheegay in Mujaahidiinta ku sugan gobolka Qunduz ay ka hor tageen weerar abaabulan oo saliibiyiinta Mareykanka iyo ciidanka kumandooska xukuumada ay kusoo qaadeen deegaano gobolka ka tirsan.
Dagaalada ugu xoogan ayaa ka kala dhacay Mandiqadaha Nahr Suufi, Sheykhan, Lagmano, Zakhil iyo Goondi, cadawgana waxaa lagu gaarsiiyey khasaare xoogan.
Inta la xaqiijiyey dagaaladi ka dhacay deegaanadan waxaa lagu dilay Hal Askari oo American ah iyo 29 ka tirsan ciidanka Gaarka ah ee xukuumada uu hogaamiyo Ashraf Ghaani, sidoo kalena waxaa lagu dhaawacay Labo Askari o kale oo American ah iyo Sideed ka tirsana Maleeshiyada xukuumada Ridada Kaabul.
Qoraalka Imaarada ayaa lagu sheegay in Askarta American-ka ah ay qorshahan gadaal ka riixayeen, ayna ahaayeen kuwa weerarka soo Abaaulay, Mujaahidiintana ay u suurta gashay in gaari ay wateen ciidamada Mareykanka qarax miino la beegsadaan, taas oo sabbabtay dhimashada Askariga iyo dhaawaca labada kale ee American-ka ah.
Dagaaladan ayaa socday ku dhawaad Labo Maalmood oo xiriir ah,iyadoo ugu dambeyntii ay ku qasbanaadeen kolanyada ciidamada Mareykanku horkacayaan dib u ga gurtaan deegaanada hoos yimaada Degmada Jahardirah ee ka tirsan gobolka Qunduz ee dhaca woqooyiga wadanka Afghaanistaan.
Tobaneeyo isugu jirta Askar iyo Saraakiil American- ah ayaa lagu dilay weeraro maalmihii lasoo dhaafay ay qaadeen ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga Afghanistan.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm 04-11-1439 Hijri.
Next: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka 05-11-1439 Hijri.